UDLIWANONDLEBE: UROJINA BAJRACHARYA AMANTOMBAZANA KWITEKHNOLOJI YENEPAL - IKHOWUDI
Udliwanondlebe: URojina Bajracharya, uMququzeleli weNtombazana yaMantombazana kwiTekhnoloji yeNepal
Kwangoko kulenyanga, ndifumene ithuba lokuthetha noMsunguli womlingani we-Girls in Technology uRojina Bajracharya, owayetyelele eNew York njengophumeleleyo kwi-Toptal's Scholarship for Women Developpers kunye no-Anna Chiara Belini wase-Toptal. Siye sathetha ngomsebenzi wakhe eNepal kulo nyaka uphelileyo, ukuba uhlala kanjani ekhuthazekile ngaphandle kwamabala amabi, kunye nezicwangciso zakhe zexesha elizayo.
UCharline Jao (TMS) : Ndixelele kancinci malunga naMantombazana kwiTekhnoloji eNepal kunye nento oyenzayo apho.
URojina Bajracharya : Luluntu lwamantombazana olubonelela ngeqonga eliqhelekileyo kubo bonke abafundi okanye abaphumelele ekufundeni itekhnoloji eNepal, okanye ubunjineli bekhompyuter. Ayisiyiyo loo nto kuphela, egubungela ukuphathwa kolwazi, itekhnoloji yeenkcukacha zobunjineli, kunye ne-BIM-asigubungeli kuphela itekhnoloji yamantombazana, kodwa nenkalo yolawulo kuba iBIM, ulawulo lolwazi, itekhnoloji nayo iyayidinga loo nxalenye. Ke, indlela yokukhuthaza, ukuzisa onke amantombazana kunye neenkqubo zokwazisa, ukwenza iindibano zocweyo zamantombazana kunye neeseshoni zoqeqesho zamantombazana ukuze beze kuthi bafunde kunye. Kwiikholeji esihlala sibona kukho amakhwenkwe kuphela eNepal, kwimeko yaseNepal kukho amantombazana ambalwa kwitekhnoloji.
Njl : Kutheni le nto inani labantu linjalo?
URojina : Ndicinga ukuba oko kuyingqondo. Ndicinga ukuba intombazana, nangona befunda ubunjineli bekhompyuter bacinga ukuba yinto yenkwenkwe leyo. Njengokuba bezazi izinto ezininzi, kodwa kunjalo, abazithembanga ngayo, ngokungathi andinakuyenza.
Njl : Ubufundiswa kakhulu kwinkqubo, ke ucinga ukuba yahluke njani ekubeni uzifundise xa kuthelekiswa nokuba noluntu olufana nolwakho?
URojina Kwimeko yeNepal, xa ndiseklasini ndiza kuba phakathi kwamantombazana amabini eklasini ke xa ndididekile yinkqubo andifuni ukwabelana ngayo namakhwenkwe, ngathi, andazi le. Zingaba zizinto ezilula kunye nokudideka, kodwa noko kunzima. Ukucinga ukuba ndibuza le nto, kuvakala ngathi, kulungile andizukuyibuza, ndiyilibale kwaye ibe sisiqhelo kwaye siyafunda, kodwa ayisebenzi.
Njl : Ke ndiyakuvuyela kwi Isifundo seToptal , oko kuyonwabisa ngokwenene.
URojina : Enkosi!
Njl : Ndixelele ke ngezicwangciso zakho, uzakwenza ntoni ngeToptal?
URojina : Ndindwendwela iNew York! [ehleka] Siya kwiminyhadala eyahlukeneyo.
UAna Chiara Belini : Siququzelele iveki yemicimbi kuye, ke simsa kwiintlanganiso ezimbalwa, ezinye iindibano zocweyo, kwaye ke ngokuhlwanje sinomnyhadala wabasetyhini oKhowudi. Kukudibana ngokuhlwanje, ngomso, isidlo sakusasa sobuchwephesha eMicrosoft kwaye sinendibano yocweyo yeentsuku ezimbini kuGoogle, ke yinto encinci-besifuna ukunika uRojina ithuba lokudibana nabanye beenkqubo kunye nabantu anokufumana inkuthazo kubo kunye nabasetyhini Itekhnoloji eyomeleleyo ke sinentlanganiso ezimbalwa noosomashishini. Imincili.
Njl : Ke ukukhankanyile oku ngaphambili malunga noluntu, kodwa ucinga ukuba yintoni ukubaluleka koqeqesho lwabasetyhini kubuchwephesha?
URojina : Kuba lula ukunxibelelana.
Njl : Ngaba unayo inkuthazo yabasetyhini kubuchwephesha ngokukodwa?
URojina : Ndabunobunzima kubomi bam benkqubo yokufunda ngoko kuvakala ngathi, kufanelekile ukuba siqale ngokwenza into nakwilizwe lethu, nakumantombazana afana nathi. Abahlobo bam, bafunda ubunzululwazi bekhompyutha kodwa… ulwazi olusebenzayo alwenziwanga ngokunjalo. Njengokuba siqala ikholeji kwaye sijoyina inkampani ethile ngomsebenzi, yahluke mpela kuleyo besiyifunda kwikholeji.
Njl : Sijongana njani nale mingeni esinokuthi singayiboni kuseto lweklasi? Uhlangabezana njani nale miqobo ingabandakanyi izakhono zobugcisa kwindawo yokusebenza?
URojina Ndicinga ukuba elona candelo libalulekileyo kunxibelelwano, kufuneka sinxibelelane ngcono. Ukuba asazi nto, okanye kufanelekile ukuba sibuze imibuzo malunga nento esididekile ngayo nakubani na-iprogramu ephezulu yabasetyhini okanye ngenye indlela. Ndicinga ukuba unxibelelwano yeyona nto iphambili ekufumaneni ulwazi, kuya kufuneka ubuze ukuba awazi, ungathi andazi ndicela undifundise. Ukuba abazi ukuba ababuzi imibuzo. Yeyona ngxaki iphambili.
Njl : Ke ukuthatha inyathelo elingaphezulu, usazi ukuba ucele nini uncedo?
URojina : Ewe.
Njl : Ke ukuba amantombazana azabalazela ukungena kubuchwephesha, zeziphi iingcebiso zakho ezilungileyo?
Rojina: Ndicinga ukuqala, yenza iimodeli ezikhuthazayo esele zikolu shishino: fumana abafazi kumzi mveliso we-tech njengo-Anna. Funda iibhloko, khangela kwi-intanethi ukufunda iiblogi malunga nobuntu kwi-tech, zininzi iinkokheli.
Njl : Ngaba ikhona into kwi-tech onwabe ngayo ngoku?
Njl : Ndixelele malunga namantombazana athatha inxaxheba kule nkqubo, aya kwiiwekhishophu zakho.
URojina : Sinabo bazalise ifom kwaye nabani na unokuza. Nokuba ngaba baphumelele na, nokuba bakwisikolo samabanga aphakamileyo, kwizidanga zokuqala, okanye nakweliphi inqanaba abanomdla wokufaka iikhowudi… .kungunyaka omnye kwaye bendithetha ngoluhlobo, andithethi kakhulu, ndifunde ukunxibelelana Isini.
Njl Kuziva njani ukubonwa njengenkokeli kubuchwephesha ngoku?
URojina : Akufani nokuba yinkokheli, yenza ukuba wonke umntu abe yinkokeli apho. Lowo uzayo uyinkokeli.
Njl : Ndicinga indlela ebhetele yokubiza ibinzana, ungene njani kule ndima njengomcebisi? Ngaba yayiyinto ekufuneka ukhulele kuyo ukuze wonwabe?
URojina : Kufana, kufuneka ufumane ingxaki, ngoko yintoni ingxaki kwi-tech? Baninzi kakhulu amantombazana amancinci ebaleni ... Ndiye ndaba namava okunganxibelelani kakuhle ekholejini. Amava: ukuze ndiqonde isayikholoji yentombazana. Amantombazana amaninzi anjengam, anengxaki efanayo ngoku –kuba kutheni ungabaniki iqonga lokwenza yonke into kwangethuba?
Njl Zithini izicwangciso zakho njengoko i-Girls in Technology iqhubeka, ubona njani ukuba iyakhula?
URojina : Iyakhula ngoku, ekudibaneni besinamantombazana amaninzi! Bendikwinqwelomoya kwaye bendinemincili nyani ndithe xa ndibona uFacebook ndavuya kakhulu kuba maninzi amantombazana! Sele ikhula.
Njl Uhlala njani unomdla?
URojina : Ndicinga ukuba inkuthazo yimvakalelo yokuba akunjalo ngoku, nini?
UAnna : Ingqondo-ibetha kum, ndinamaqhuqhuva. Xa ndifunda isicelo sakhe ndandingathi oh oh kwaye xa ndimbiza unamandla, le drive, kwaye ndayazi ukuba singamnceda. Ndicinga ukuba yeyona nto eyenza ukuba iprojekthi yakhe ibe yimpumelelo kukuba unobuntu obuqinisekileyo… uziva uyakholelwa kwinto ayenzayo kwaye sonwabile ngokwenene ukumxhasa. Kuba siyaqonda ukuba wenza into ebalulekileyo kwaye ngumoya kanye ekufuneka siwuxhasile
URojina Andizange ndikhuthazwe, izihlobo zam zazinjalo. Andizanga kuba bendikhe ndabaxelela oku ngaphambili-nokuba emva konyaka singafumani nto, kufuneka siqhubeke ngoba ngenye imini iyakuba-ibaluleke kakhulu kwilizwe lethu, emsebenzini wethu. Kukho ukungalingani kwimveliso ye-tech.
UAnna : Kwaye ndicinga ukuba kulungile ngokukodwa ukuba wenza oku kwilizwe lakho. Baninzi abantu abathi nje kulungile ndizakufunda kwaye ndiza kuya ndawo kwaye ngesiTaliyane sikubiza ngokubaleka. Unabo bonke abantu abakrelekrele abashiya kwaye basebenza kwenye indawo kwaye uyayenza le nto-kwaye nanini na xa efunda into enkulu okanye encinci, uqala ukwenza iividiyo. Uyabona ukuba akukho nto ininzi ifumanekayo ngesiNepalese, ke uyasebenza kuloo nto. Ubuyisela kwilizwe lakhe, kwindawo yakhe, ndiyifumene nengqondo-ibetha le!
URojina : Kuba abantu, bathi kulungile. Siyakhula kwaye sineevidiyo, ezibhaliweyo, ke zilungile.
Njl : Ndiyabona ukuba xa ubona ezi zikhewu, uzibona njengethuba, nanjengokhuthazo. UAnna, bendinethemba lokuva ngakumbi malunga nokubona isicelo sakhe.
UAnna : Ke, isifundi yinkqubo ebesicinga ngayo kunyaka ophelileyo. Kusithathe ixesha ukuyikhaba ngoba besifuna ukuthatha isigqibo sokuba sijolise kubani kwaye siza kuya njani-khange sifune ukuba ibe yinto eyodwa, njengoko, namhlanje sifumana umntu omnye, siyabanika isifundi kunye nohlobo lokulibala ngayo. Sifuna ukuba ibe yinto encinci-into enefuthe ngokwenene. Sithathe isigqibo sokuba ne-12 yokufunda, umntu omnye ngenyanga ngonyaka. Kwaye ibhaso lezoqoqosho ke i-5000 yayo yeedola kwaye yingcebiso. Kudala sisebenza kakhulu ukufumana ifomula efanelekileyo yempembelelo kwaye iqhuba kakuhle. Iziphumo zeRojina zilungile, sabelana ngebali lakhe. Sifumene abafaki zicelo abaninzi, kwaye abanye bebejonga nje imali kwaye safumana ezinye izicelo ezinkulu kwaye emva kokuthumela ibhlog yakhe malunga naye- sifumene ezithandekayo ngakumbi kuba amantombazana aqala ukubona into esikuyo. Simazise njengophumeleleyo wokuqala ngoDisemba.
Ekuqaleni bendijonge usetyenziso, kodwa uninzi lwezicelo ezivela kumantombazana. Ndithi amantombazana, kodwa eneneni ngabafazi abancinci kubuchwephesha besayensi, izibalo, nantoni na – ayisiyiyo nje yabaphuhlisi bamantombazana. Ngokuqinisekileyo siza kutshintsha igama kuba ayenzelwanga isayensi yekhompyuter kuphela. Sineentlobo zonke zamantombazana amangalisayo avela kuyo yonke indawo: iArgentina, iRussia, iUkraine, iU.S., kodwa sikwanabafazi abakwiminyaka yam nangaphezulu abafuna ukwenza utshintsho.
Ndinebhongo ngale nkqubo kuba indivumela ndibuyise. Ndinebali elahlukileyo, ndazalwa ngexesha elahlukileyo nakwilizwe elahlukileyo. Ewe, oko kuvakala kubi – lixesha lobuchwephesha elahlukileyo. Ndinethamsanqa ukubona apho ikhoyo ngoku kwaye ndifuna ngokwenene — baninzi abantu abanetalente. Xa ndabona isicelo sakhe ndavele ndayikopa encokweni kwaye ndandifana nabafana esinabo abaphumeleleyo kuqala. Ingqondo-ebetha into akwaziyo ukuyenza ngokuqhuba kwakhe nje. Kithina, ubuchule, ukuqhuba, kunye nokunyaniseka, zizinto ezintathu esifuna ukujonga kuzo. Sigqibe kwelokuba sifumane iikhosi zasimahla ezikwi-intanethi, iilayisensi ezili-10 zabo zokudibana ukuze bafumane imfundo engakumbi. Sinokuba nabantu bathetha ukude ngokudibana kwabo.
Kutheni le nto iHadesi yathumba ububele
URojina : Siza kubamba inkomfa yamazwe ngamazwe yaMantombazana kwiThekhinoloji eNepal.
UAnna : Kwaye nimzise eNew York, lutshintsho, luyabona –kwam kum kwiminyaka emibini eyadlulayo ukuya kwinkomfa eyayiseSan Francisco kwakuchukumisa kwaye ndicinga ukuya kwiindawo zobuchwephesha kunye nabantu abanomdla ofana nowakho… Kwenzeka ntoni kum emveni kokuba ndigodukile kwaye iinyanga ezi-2-3 ndinetyala lamandla.
URojina : Ezi zifundo zininzi zabahlobo bam, bafuna ukufunda ngayo, bafuna ukwenza le ndiyenzayo kwaye bathi bafuna ukwenza iividiyo, iibhlog, kunye nemithombo evulekileyo yemithombo
UAnna : Yiyo kanye injongo. Ukuba sinako, sifuna ukuxhasa abantu abaza kubuyisa kuba uya kuba nefuthe elibanzi. Ubuza ukuba yintoni amantombazana anokuyenza ukungena kubuchwephesha, kwaye ndicinga ukuba enye yezinto abantu abanokuyenza kukuqala nje into elula. Imithombo yoluntu evulekileyo inokuba yinto eyoyikisayo okanye enobundlobongela kwaye banokubhengeza nabasetyhini, kodwa kukho izixhobo ezintle. Unokufikelela ebantwini, abantu basetyhini abanempembelelo. Kuya kufuneka ujonge kwicala elilungileyo.
Njl : Kuvakala ngathi kukho into eqinileyo yokutshintshiselana ngokwenkcubeko kuba inje ngamazwe.
UAnna : Siyinkampani yamazwe aphesheya kakhulu, iqela elinenkcubeko eyahlukileyo eli ngumceli mngeni kwaye lisenza sizuze kakhulu kuthi sonke. Ayisiyo enye yeendlela zethu, kodwa ukuba kuyenzeka sonwabile.
URojina : Kwaye abantu bayaqhubeka nokubhala, bafuna ukwazi ngayo. Emva kokuphumelela isifundi, Amantombazana kwiTekhnoloji, yinto eyahlukileyo kodwa yinto ebonisa. Iya kunika ibali kwaye abantu bazokwazi ngayo kwaye beze kuthi, ke kulungile. Ndicinga ukuba amabali abaluleke kakhulu.
Njl Ucinga ukuba abantu mabathathe ntoni kwibali lakho?
irente ikati usuku
URojina : Ndicinga ukuba amantombazana kufuneka aqale, nokuba kulula okanye kunzima kufuneka aqale ngoku, akufuneki bathi andizithembanga.
UAnna : Ndicinga ukuba, ndifunde into enomdla kunyaka ophelileyo. Xa ufunda ngabafazi kubuchwephesha, njengoMarissa Mayer umphathi we-Yahoo, kukude kakhulu kuwe. Kwaye oku kujongeka kukude kude-, abafazi kufuneka bavunyelwe ukuba baqheleke kwaye bangabalulekanga. Baninzi abaphuhlisi abaqhelekileyo. Akunyanzelekanga ukuba ukhetheke ukuba ngumfazi kwitekhnoloji.
Njl : Ungaphumelela ngaphandle kokuba yi-CEO, ungasebenza kulo naliphi na inqanaba kwaye uphumelele.
UAnna : Ngqo. Unokuba ngumfazi omncinci waseNepal kwaye wenze utshintsho. Ungumkhuthazi ongcono kumantombazana amancinci kuba i-CEO ye-Yahoo ikude kakhulu kuwe, waya kule kholeji, uvela kule ntsapho, isondele kakhulu kwabanye abantu kwaye amantombazana amaninzi anokukuchonga.
URojina : ENepal, kukho abadwelisi beenkqubo abangabafazi, abaphezulu abaneminyaka eli-10 nangaphezulu yamava, ke siza kubabiza kwaye basixelele ngamava abo, ibali labo, kwaye iya kunceda amantombazana ukuba azi abasetyhini abakwenzileyo oko. Kubaluleke kakhulu, ndiyacinga.
Njl : Ukwabelana nje ngebali labo kunesiphumo esomeleleyo ngokwenene.
URojina : Kananjalo sinokubabiza ukuba basifundise, abantu beza kuthi basifundise. Iya kufundisa inethiwekhi, amava wabaqalayo, phakathi-kwinqanaba- hayi amantombazana kuphela, kodwa amakhwenkwe. Akukho malunga nokuxhotyiswa, akunjalo. Imalunga nokuchaphazela nokudibanisa abantu. Nge-Epreli, izakuba sisikhumbuzo sokuqala saMantombazana kwiTekhnoloji.
Unokwazi ukuya kwi amanqaku aphezulu ukufunda okungakumbi ngezixhobo zabo kunye nezifundo kwaye ulandele uRojina kwi Amantombazana kwiTekhnoloji yeNepal !
Landa I-Cutter Cutters
Ubomi Bezixhobo Zanamhlanje
Ujoseph Gordon Levitt
Uqeqesha Njani Inamba Yakho 2
I-boardwalk empire ixesha le-2 lokugqibela
I-neil degrasse tyson ekufikeni
Kutheni wonke umntu eyithiyile ingokuhlwa
Isimanga somfazi isigqubuthelo semagazini
nkosi yemisesane unganxibanga